Madaxa Dib Ugulaabo Woods Documentary Doona Doona Dokumentiga Mashruuca Witch Blair - iHorror
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh Madaxa Dib Ugulaabo Woods Mashruuc Documentary Mashruuc Sixiroole Blair Soosocda
Madaxa Dib Ugulaabo Woods Mashruuc Documentary Mashruuc Sixiroole Blair Soosocda
Haddii aad jeceshahay, cabsi ama aad neceb tahay, taasi ma diidi karo Mashruuca Blair Witch waa mid kamid ah aflaamta saameynta iyo raadadka baaxada leh ku reebay taariikhda naxdinta. Waxaa la sii daayay 1999, filimka miisaaniyada yar ayaa loo tiriyay inuu bilaabay laadadka la helay ee nooc-hoosaadka ah - waxaanan kugu dhiirigelinaynaa inaadan ku eedeynin 10,001 nuqul oo nuqul ka yimid!
Waxaa jira filimo yar oo cabsi leh oo si dhab ah u argagaxsan dhagaystayaasha in ka badan Mashruuca Blair Witch, Kaas oo lahaa olole suuq geyn ah oo qurux badan oo dad badani markii hore ku qanacsanaayeen inay tahay shaqo aan mala-awaal ahayn. In kasta oo aan dabcan hadda ognahay runta, haddana weli waxay u tahay mid cabsi badan weligeed, ku dhowaad labaatan sano ka dib.
Inta aan sugeyno Mashruuca Blair Witch 3, waxaa hadda la shaaciyay in dukumiinti ku saabsan filimkii asalka ahaa uu socdo. Sida saxda ah cinwaan looga dhigay Filimka Woods, Doc dhererka muuqaalka ayaa kaa qaadi doona gadaasha muuqaalka filimka caanka ah, oo bixinaya marin aan horay loo arag oo ku saabsan dhacdada.
Waa tan burburka rasmiga ah:
Bishii Oktoobar 1997, koox filim sameeyeyaal ah ayaa ku dhiiraday kaynta Maryland si ay u soo saaraan filim cabsi cabsi leh oo madax-bannaan oo hooseeya. MASHRUUCA SIXIRKA BILAARKA wuxuu noqon doonaa dhacdo caalami ah wuxuuna bilaabay nooca "muuqaalada la helay" ee wali ah xoog xoogan maanta. Hadda, markii ugu horraysay, waad arki kartaa sida uu jabhaddaas jabiyay rikoodh-jabintu u abuurmay. Laga soo bilaabo cajalado aan waligood horay loo arkin oo ah shirar horay loo soo saaray, cajaladaha maqalka, iyo muuqaalada tijaabada illaa toogashada dhabta ah, baaritaanka hore ee muuqaalka, iyo suuq geynta xafladaha filimka 'Sundance Film Festival', dhammaan shaqaalaha muhiimka ah ayaa kugu hagaya adiga doodaha iyo go'aannada naxdin dareemid classic.
Fiiri xayeysiiska doc-ka hoose, oo lagu wado inuu soo baxo bisha Ogosto ee soo socota FrightFest Glasgow.
Newmashruuca blair saaxirad
Naxdin baa guriga timid: Febraayo 17, 2015
Ka taxaddar wuxuush Shisheeyaha Shisheeyaha: Xaqiiqda dhabta ah ee u diraysa Bini-aadamka Mars